Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Tirada wadamada ay ku dhufatay noocyada cusub ee Omicron ee koraya
Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
Iyada oo ay jirto argagaxa adduunka oo dhan ka dhashay Omicron, dalal badan ayaa dib u soo rogay xayiraadaha safarka iyagoo isku dayaya in ay xaddidaan faafitaankiisa.
Tan iyo markii ugu horreysay ee nooca Omicron ee COVID-19 lagu arkay Koonfur Afrika, waddamo badan oo adduunka ah ayaa soo sheegaya imaatinka nooca cusub ee dhulkooda.
Nooc cusub oo COVID-19 ah ayaa ka walaacsan daawoyinka maadaama ay caqabad ku noqon karto tallaallada. Si kastaba ha noqotee, Ururka Caafimaadka Adduunka (WHO) wuxuu ku adkaysanayaa inaan wali jirin caddayn saynis ah oo ku saabsan sida xun ee calaamadaha caabuqa loo barbar dhigo noocyada kale ee COVID-19.
Isla markaa, iyada oo ay jirto argagaxa adduunka oo dhan ayaa ka dhashay omicronWadamo badan ayaa dib u soo rogay xayiraadaha safarka iyagoo isku dayaya in ay xaddidaan faafitaankiisa.
Arbacadii la arkay United States of America soo sheeg kiiskii ugu horeeyay ee la xaqiijiyay ee dalka ee kala duwanaanshaha Omicron ee California, ka dib markii qof socdaal ah, oo si buuxda loo tallaalay, uu ka soo laabtay Koonfur Afrika Noofambar 22. Dalku wuxuu go'aansaday inuu u baahdo baaritaan taban hal maalin gudaheed safarka dhammaan imaatinka, haddii ay yihiin waa la tallaalay iyo in kale.
Saraakiisha maxalliga ah ayaa helay saddex kiis oo Omicron ah, mid ka mid ah jasiiradda Reunion ee Badweynta Hindiya iyo laba kale oo laga helay dhul weynaha Faransiiska. Dhammaan kiisaska, shakhsiyaadka ayaa dhowaan u socdaalay Afrika.
Maanta, Hindiya waxay ku dhawaaqday kiisaskii ugu horreeyay ee la xaqiijiyay ee xanuunkan ka dib markii laba nin oo ku nool gobolka Karnataka laga helay cudurka ka dib markii ay ka soo laabteen dibadda. Waxa kormeer ku sameeyey masuuliyiin ka tirsan dawladda, waxaana lagu wadaa in la baadho oo la tijaabiyo dhammaan xidhiidhkooda hoose iyo kuwa sareba.
Qaranka Waqooyiga Yurub wuxuu xaqiijiyay dhowr cudur oo ku saabsan isku-bedelka COVID-19, in kasta oo mid ka mid ah dadka ay saameysay la og yahay inuu ka soo qeyb galay riwaayad ay ka qeyb galeen ilaa 2,000 ka hor inta aan la tijaabin cudurka. Iyadoo aan weli la soo saarin siyaasad qaran oo dhan, Danmark waxay xidhay iskuul kiis looga shakiyay, iyadoo laga cabsi qabay, inay horseedi karto faafitaan ballaaran.
Laba qof oo ku nool degmada xeebta galbeed ee Oeygarden ayaa laga helay cudurka omicron Arbacadii, taasoo calaamad u ah kiisaskii ugu horreeyay ee noocyada kala duwan ee Norway, iyadoo gobolka uu la soo deristay kororka caabuqyada taasoo keentay in la adkeeyo xannibaadaha maxalliga ah. Walaaca ka sii badan ee saraakiisha, waddanku wuxuu hadda baarayaa koox weyn oo ugu yaraan 50 kiis ah oo lala xiriirinayo xaflad kirismas.
Iyadoo dib loo soo rogay xayiraadaha COVID-19, oo ay ku jiraan waajibaadka maaskaro, Hay'adda Ammaanka Caafimaadka UK waxay xaqiijisay in guud ahaan England iyo Scotland, 32 xaaladood oo kala duwanaansho ah laga helay, halka Waqooyiga Ireland iyo Wales aysan diiwaangelin hal cudur oo cusub oo isbedelay. cadaadis.
Maamulka caafimaadka ayaa diiwaan geliyay sagaal xaaladood oo la xaqiijiyay omicron Cadaadis, oo leh siddeed caabuqa New South Wales iyo mid ka mid ah Waqooyiga Territory. Saraakiisha ayaa dalka galiyay heegan, iyagoo ka baqaya inay jiraan kiisas badan ka dib markii mid ka mid ah shaqsiyaadka faafa uu booqday xarun mashquul badan ka hor inta uusan tijaabin cudurka.
Khamiista, Finland iyo Singapore xaqiijiyay joogitaanka cadaadiska cusub, halka Romania sidoo kale waxay ka baqaysaa inay hore u leedahay hal kiis.